Moldova | Akụkọ Njem
Maria | | Getaways Europe, Moldova
Foto | Njem nleta
Republic nke Moldova bụ mba gbara ókèala na Romania na ọdịda anyanwụ na Ukraine n’ọwụwa anyanwụ nke dị na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke Europe nke ọtụtụ ndị njem na-amaghị. Ọbụna ịbụ obere obodo, Moldova bara ọgaranya na akụ ndị sitere n'okike, na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka ndị hụrụ okike n'anya. Maka ndị na-enwe obi ụtọ ịchọpụta gastronomy nke mba ndị ọzọ na ụzọ ndị metụtara mmanya.
Ọ dị gị ka amatara gị? Ya mere, anyị na-agba gị ume ka ị nọgide na-agụ n'ihi na na post na-esonụ anyị ga-enyocha ihe kpatara ịga Moldova.
1 Nature na Moldova
2 Zọ Mmanya
3 Omenala di na Moldova
3.1 Ebe e wusiri ike nke Soroca
3.2 Obe nke Basarabia
3.3 Ebe obibi ndị mọnk Tapova
3.4 Helọ ihe nkiri Orheiul Vechi
3.5 Ogige Park
3.6 Alexanderlọ Alexander Pushkin- Museum
4 Moldovan gastronomy
Nature na Moldova
Ihe karịrị 80% nke ebe ndị njem nleta dị na ime obodo. Okirikiri ala nke mba ahụ bụ ngosipụta nke ihu igwe Moldova. A na-ahụ nke a site na ogologo oge ọkọchị na obere oge oyi ka anyị wee nwee ike ịchọta oke ọhịa na ugwu ndị dị elu n'etiti akụkụ ahụ, steepụ na-enweghị ngwụcha nke ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ na ndịda ugwu Budjak.
N'adịghị ka mba ndị ọzọ dị na Europe, Moldova emetụtaghị njem nlegharị anya yabụ ọdịdị ya anaghị emebi emebi ma na-echekwa ọtụtụ ihe okike ndị ọzọ: ndagwurugwu nke oke ọhịa oge ochie, osimiri, ọdọ mmiri, ugwu na ubi vaịn.
Moldova mmanya na-enweta aha ma na-adọta ndị ọbịa sitere n'ọtụtụ mba iji mee njem nlegharị mmanya iji ghọta ọdịnala nke ihe ọ thisụ thisụ a na mba ahụ. Ọtụtụ wineries na-eleta ụlọ ọrụ ha na veranda ha dị n'okpuru ala iji kpughee ihe nzuzo nke mmanya Moldovan.
Otu ihe atụ na-adọrọ mmasị na ụzọ mmanya bụ Milestii Mici, ụlọ mmanya kasị ukwuu n'ụwa nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde karama abụọ., mepụtara n'onwe ha. Ọ dị kilomita iri-abụọ n’ebe ndịda Chisinau, isi obodo Moldova, n’etiti Romania na Ukraine.
Ọzọkwa, n'oge mgbụsị akwụkwọ, ndị Moldova na-emepụta mmanya na-eto eto a na-akpọ Tulburel. Ọdịnala kwuru na onye mbụ ga-anwale ya ga-achọ ka onye ọbịa a nwee ọchichị kacha mma n'ụwa ka o nwee ike mezuo ihe ọ chọrọ.
Omenala di na Moldova
Moldova nwere ọtụtụ ebe mmasị na akụkọ ihe mere eme-omenala larịị. Examplesfọdụ ihe atụ bụ:
Ebe e wusiri ike nke Soroca
Onye wuru ya na mkpọmkpọ ebe nke ebe ochie nke Genoese nke Alciona nke dị n'ebe ugwu Moldavia site n'aka Stephen the Great na narị afọ nke XNUMX. Ha na Museum of History na Ethnography ha na-etolite ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme nke mkpa na mba ahụ.
Obe nke Basarabia
O nwere monasteries anọ edoziri n’ụdị obe: Harbovat, Harjauca, Raciula na Frumoasa.
Ebe obibi ndị mọnk Tapova
Ọ bụ ebe obibi ndị mọnk nke nwere ụlọ atọ a wapụtara n'oké nkume. Ìgwè nke mbụ nwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ na chọọchị raara nye Holy Cross dị na narị afọ nke XNUMX ruo nke XNUMX. Ihe owuwu nke abụọ bụ ụlọ ụka San Nicolás nke malitere na narị afọ nke XNUMX. N'ikpeazụ, ụka nke mwere nke sitere na narị afọ nke XNUMX ruo XNUMX.
Helọ ihe nkiri Orheiul Vechi
Ihe dị ka kilomita 60 site na isi obodo ahụ, e nwere ebe ngosi ihe nkiri na-emeghe ikuku nke Orheiul Vechi ebe ebe nchekwa nke obodo dị iche iche echekwara dịka mgbidi Geto-Dacian site na narị afọ nke XNUMX BC, obodo Tatar-Mongolian bụ Sehr al-Cedid site na XNUMXth narị afọ na obodo Moldova nke Orhei site na narị afọ XV-XVII.
Ọ bụ ogige kachasị ukwuu na Moldova, nke dị n'etiti obodo Taul ma gbaa ụlọ obibi Pommers gburugburu. Admission bụ n'efu na e mere ya na a obere ọdọ mma na 150 iche nke osisi.
Alexanderlọ Alexander Pushkin- Museum
Onye Russia na-ede uri Alexander Pushkin chụgara Moldova ruo afọ 3. N’ebe ngosi ihe nka nke ulo a ichoputara ufodu ihe o jiri kee poems ya. Examplesfọdụ ihe atụ bụ Gypsy, Nwa Shawl y Maka Ovid.
E guzobere ọtụtụ nri Moldova n'ọtụtụ narị afọ n'okpuru nduzi nke ndị Greek, ndị Turkey, Western Europe, na nri nke Ukraine na Russia. Achịcha anụ na akwukwo nri yana ose na iche iche dị iche iche bụ ụdị.
Nri ọdịnala nke mba ahụ bụ Egwuregwu, a ọka porridge a na-eji anụ egweri, anụ eghe, chiiz ma ọ bụ ude nke na-esokarị nri ọzọ a na-akpọ Moldovan Rachitura nke bu ezi na ezi ofe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Moldova